HomeGolahii wakiilada 1997
Axmed Maxamed Aadan (Qaybe) Gudoomiyaha Golaha Wakiilada 1997
Muddada uu xilka hayay Golahani wuxuu ahaa 1997-2005, taas oo ay sababeen dooroshada Golaha Wakiilada oo aad u adkaatay iyadoo la isku maandhaafsanaa saamiga kuraasta uu Gobol yeelanayo, waxayna arrintaasi carqalad ku abuurtay Ansixinta Xeerarka ku saabsan Doorashooyinka siiba Xeerka Doorashada Golaha Wakiiladda. Waxa dhab ahaan Golahani iska xilsaaray sidii u gudan lahaa waajibaadkiisa Dastuuriga ah waxana la odhan karaa Golahani wuxuu dhamaystiray hanaankii Dimuqraadiyadeed ee JSL. Golahani wuxuu ka koobnaa 82 xubnood.
Goluhu wuxuu fadhigiisii ugu horeeyay ku doorteen shir-gudoonkii hogaamin lahaa waxaana u tartamay oo ku guulaystay inay noqdaan shir-gudoonka Golaha wakiiladda:
Axmed Maxamed Aadan (Qaybe)
C/qaadir Ismaaciil Jirde Gudoomiye-ku-xigeenka 1aad.
Cilmi Xirsi Cali Gudoomiye-ku-xigeenka 2aad.
Waxa kalfadhigaas uu ku ansixiyay xeerhoosaadkii uu ku shaqayn lahaa oo ka kooban 52 Qodob, isla markaana waxa uuu shirgudoonku soo dhisay guddiyadii fudaydin lahaa socodsiinta hawala.Golaha Wakiilada oo ka koobnaa lix Guddi hoosaad oo kala ahaa:
Guddida Joogtada ah.
Guddida arrimaha Bulshada.
Guddida arimaha Gudaha iyo Difaaca.
Guddida Siyaasada arimaha Dibada iyo iskaashiga Caalamiga ah.
Gudidda Garsoorka, Dastuurka iyo Shuruucda.
Waxa uu qabtay Golahani waxqabadkiisii oo ugu mihiimsanaa ansixinta masuuliyiinta Qaranka iyo ansixinta mashuucyo sharci. Mudadii golahaasi jiray wuxuu ansixiyay 32 mashruuc sharci ah oo dhaqan gal noqday oo isugu jira mashruuc sharci xukuumadu keentay iyo mashruuc sharci uu Goluhu curiyay.